Fiatoana - Quote Pedia
Isika rehetra dia mila fanentanana sy famporisihana sasany handehanana amin'ny fiainantsika andavan'andro. Ny fahatsapan-tena sy ny fanantenana dia manampy antsika hibanjina sy hitandrina hatrany. Manosika antsika hanosika ny tenantsika bebe kokoa sy hanana fahasahiana amin'ny fahasahiana. Manampy antsika koa hanome aingam-panahy sy hiarahana amin'ny hafa izay miatrika olana eo amin'ny fiainany.
Ny fomba tsara iray hanoloranao ny tenanao ny antony manosika dia ny famakivaky ireo votoaty manentana mandrisika sy tena mampiavaka. Teny nindramina dia ampitaina tokoa ary miangavy amin'ny toe-javatra iray izay mety ho sarotra sy sarotra hiatrehana izany. Na dia tsara aza ny zavatra iray, ny teny feno dikany dia mampianatra anao hihazona fahasambarana sambatra sy hankasitraka izay ananantsika.
Quotespedia dia toerana tsara hitrandrahana amin'ny teny manintona isaky ny andiany. Izy io dia manana sokajy n'ny olona avy amin'ny làlan'ny fiainana rehetra izay azonao eritreretina. Ireo teny nindramina dia afaka manintona olona iray 14 taona ary afaka manome aingam-panahy ny olom-banona 65 taona koa satria tsy azo antoka sy azo ampiharina intsony ireo voalaza rehetra ireo.
Ny tranokala dia ahafahanao mikaroka lohahevitra iray ary manokatra anao amin'ny andiany be dia be ny teny avy amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao amin'ny lohahevitra voafantina. Noho izany, mitrandraka hatrany, mahazo aingam-panahy ary manosika ny hafa koa!
Raha mahita andinin-teny izay tianao ny mandika sy / na mampiasa azy ireo ao amin'ny bilaoginao / tranonkalanao na any amin'ny toerana hafa ianao, dia fihetsika tsara ho an'ny toetranao amin'ity tranokala ity.
Azafady vakio tsara ity mpandika teny ity alohan'ny hampiasana ity tranokala ity.
Jereo ihany koa ny Quotespedia.org Terms amin'ny Service ary politika fiarovana fiainan'olona.
Ity mpanararaotra ity dia mifehy ny fampiasana ny Quotespedia.org. Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity dia ekenanao tanteraka ity mpanohitra ity. Raha tsy mitovy hevitra amin'ny ampahany amin'ny fiambenana ianao, dia aza mampiasa Quotespedia.org na tranokala sy fananana ary orinasa hafa. Izahay dia manana ny zo hanova ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, tokony hiverenanao miverina tsindraindray ny fanovana. Amin'ny fampiasana ity tranonkala ity aorian'ny fametrahantsika fanovana dia manaiky ny hanaiky ireo fanovana ireo ianao, na efa nandinika azy ireo na tsia ianao.
Ny sary nampiasaina ao amin'ny Quotespedia.org dia nalaina tao amin'ny tranokala maimaim-poana sy ny mpampiasa ary ny mpampiasa ary heverina fa ao amin'ny "sehatra ho an'ny daholobe". Isika dia manangona azy ireo, afetraho ireo ary alao anaty galeriage. Raha ianao no tompon-kevitra amin'ny sary rehetra ary maniry ny hanesoranao izany azafady alefaso aminay ary hangalantsika tsirairay araka ny tinady izany.
Ny teny nalaina teo amin'ity tranokala ity dia natao ho an'ny tanjona fanabeazana sy antony manosika ary azo ampiasaina manokana ary maimaimpoana. Tsy misy ny vola miafina voarohirohy rehefa misintona azy ireo.